Abangama-89% baseSpain banokushintsha kwesimo sezulu njengenkinga yokuqala | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ama-eurobarometer amaningi, ama-ecobarometers nolunye ucwaningo luye lwenziwa ukuveza ukukhathazeka izakhamizi zaseYurophu ezinakho ngezindawo ezahlukahlukene ezisikhathazayo. Kusukela emnothweni, kuye ezingeni labantu abangasebenzi, ngokufika kwabokufika kanye nemvelo, ama-barometers asitshela ukuthi yiziphi izikhalazo zezakhamizi.
Kulokhu, ngokusho kwedatha eqoqwe yi-PEW Research Center, izakhamizi zaseSpain yizo ezinikeza okubaluleke kakhulu ekuguqukeni kwesimo sezulu futhi zikubheke njengengozi enkulu izwe elibhekene nayo.
Ukukhathazeka ngokushintsha kwesimo sezulu
Ama-89% wabantu abacwaningiwe abheka ukushisa komhlaba njengenye yezinkinga ezinkulu zamanje eSpain. Ngo-2013 kwenziwa nocwaningo futhi imiphumela yayihlukile. Abantu baseSpain abangama-64% besaba ukuguquka kwesimo sezulu. Njengoba sibona, inani liye lenyuka ngokumangazayo ngeminyaka embalwa.
Ukwenyuka kwamagagasi okushisa, amazinga okushisa aphakeme, isomiso, izehlakalo zezulu ezimbi kakhulu kanye neminye imiphumela yokushintsha kwesimo sezulu sekuvele kukhona ekwazeni nasekukhathaleleni kwezakhamizi eziningi.
Emazweni angama-38 afundelwe ucwaningo, Abangu-13 yilabo abakhomba ukuguquguquka kwesimo sezulu njengenselelo enkulu ezifundazweni zabo. Yize abaseSpain behamba phambili ngokukleliswa, ukukhathazeka ngomthelela walesi simo kudlangile eLatin America nase-Afrika, futhi kuyasebenza nakwabeYurophu. Ucwaningo luye lwenziwa emazweni asenyakatho, njengeRussia, lapho kungu-35% kuphela wabaphenduli abacabanga ukuthi ukushintsha kwesimo sezulu yikhona okukhathazeka kakhulu emhlabeni.
Inkinga yokukhathazeka ngokushintsha kwesimo sezulu ezikalini ezahlukahlukene zendawo ilele ekuboneni kwezakhamizi. Ngokuya ngomongo, usuku nosuku, abezindaba, njll. Izakhamizi zamazwe ahlukene zibona ukuguquka kwesimo sezulu ngezindlela ezahlukene. Isibonelo, iRussia, njengoba itholakala ebangeni elingasenyakatho yomhlaba, inamazinga okushisa aphansi kanye neqhwa eliningi. Futhi, inobusika obubandayo. Ngakho-ke, umbono wokwenyuka kwamazinga okushisa ngenxa yokushisa komhlaba kuncane kakhulu. Ngakolunye uhlangothi, eSpain (izwe elisengozini enkulu ekushintsheni kwesimo sezulu), umbono wokunyuka kwamaza okushisa, amazinga okushisa nesomiso kugcizelelwa.
Njengoba sikwazi ukubona, ukuguquka kwesimo sezulu sekuvele kuyinkinga enkulu kwabaseSpain. Manje sekusele ukuthi uhulumeni aqale ukuthatha izinyathelo maqondana nalokhu.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Abangama-89% baseSpain banokushintsha kwesimo sezulu njengenkinga yokuqala